Uploading.com Premium Account - MYSTERY ZILLION
မူလ › Sharing › Rapidshare Account ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
Nano October 2009 edited March 2010 in Rapidshare Account http&#58;//uploading.com/Login : [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]Pass : IndonesiaPlease Don't Changed Password.The account is vaild until Jun 19, 2010=========================================Click Thank Button and Reply If U Like My Post.... ========================================= မှတ်ချက်များ
Yathar October 2009 edited October 2009 Registered Users Nano;59014 said:http&#58;//uploading.com/Login : [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL]Pass : IndonesiaPlease Don't Changed Password.The account is vaild until Jun 19, 2010=========================================Click Thank Button and Reply If U Like My Post.... =========================================
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဗျာ... ဒီနေ့ uploading ကဒေါင်းစရာတွေ အများ ကျေးဇူးအရမ်းအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ... :77::77::77: princeakarit October 2009 edited October 2009 Moderators အမှန်အကန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ......မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတစ်ခုအတွက် လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.....:6::6::6::6::6::6::6: sevenlamp October 2009 edited October 2009 Registered Users [quote=nano;59014]=========================================click thank button and reply if u like my post.... =========================================ဒေါင်းစရာတော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုလို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ မျှေ၀ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ waiyan112 October 2009 edited October 2009 Registered Users ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်း အဲဒီဆိုဒ်ကနေ ဒေါင်းစရာတော်တော်များများရှိနေလို.။ asoka October 2009 edited October 2009 Registered Users ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပါ...။ အတုယူစရာဘဲ...:D။ရိုးရိုး thanks လုပ်တာ မကျေနပ်လို့...အခု ပိုစ့် အသစ်တင်ပြီးကျေးဇူးတင်တာပါ။:P waiyan112 October 2009 edited October 2009 Registered Users ကျွန်တော် ၀င်တာတော. ၀င်လို.ရတော.ဘူး။ ပတ်၀တ်မှားနေတယ်လို.ပဲပြနေတယ်။ ပြန်စစ်ပေးပါဦးနော်။ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကများ ပတ်၀တ်ချိန်းသွားလားမသိဘူးနော်။ yesithuwin October 2009 edited October 2009 Registered Users Thanks.:PIt works.Please don't change the password. princeakarit October 2009 edited October 2009 Moderators လိုချင်တာကို ဒီကနေရှာကြည့် တွေ့ရင် အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ အကောင့်ကနေဒေါင်းပေါ့ :Dhttp&#58;//www.searchshared.com/uploading.com/ challenger220 October 2009 edited October 2009 Registered Users Thanks ရုံနဲ့အားမရလို့ပါ။ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပရစေ။ Yathar October 2009 edited October 2009 Registered Users ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲပြောပါရစေ ကို Nano မသမာသူတစ်ယောက်ကြောင့် အကောင့်သေသွားပါပြီခင်ဗျာ မနေ့ ကရော ဒီနေ့ရော လုံးဝ မရတော့ပါကြောင်း.... မသမာသူတွေရှိနေပါတယ် အကောင့်ကိုသိမ်းသွားပြီဗျာ :14::14::14: waiyan112 October 2009 edited October 2009 Registered Users ဒီနေ.ဒေါင်းစရာရှိလို. ဒီအကောင်. ကိုလာရှာတာဗျ။ဒီရောက်တော.ပတ်၀တ်ချိန်းထားတယ်တဲ.ဗျ။:((:((:(( ကို nano ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောတာနားမထောင်ဘူး။ noor October 2009 edited October 2009 Registered Users ေ၀ယံ112;60898 said:ဒီနေ.ဒေါင်းစရာရှိလို. ဒီအကောင်. ကိုလာရှာတာဗျ။ဒီရောက်တော.ပတ်၀တ်ချိန်းထားတယ်တဲ.ဗျ။:((:((:(( ကို nano ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောတာနားမထောင်ဘူး။
အေးဗျာမမိုက်ပါဘူး။ ပတ်စ်၀တ်ချိန်းပြစ်ကြတယ်။ ဘာဖြစ်ကြတာတုန်း။ ရှိသေးရင် နည်းနည်းပေးပါ။\_:d/NooR Nano October 2009 edited October 2009 Registered Users ဟုတ်ပါတယ် . . . . တစ်ယောက်ယောက်က password ချိန်းသွားပြီ . . . .ရှိတာလေး ပါသွားပြီပေါ့ . . . .:14: :14::14: ညမီးအိမ် October 2009 edited October 2009 Registered Users, Moderators ကျွန်တော်လဲ အခုမှတွေ့ပြီး မှတ်ထားမယ်ကြံကာရှိသေး သူများခိုးသွားပြီတဲ့ဗျာ။ နောက်ဆို အဲလိုဝေမျှချင်တယ်ဆိုရင် အခုလိုမျိုးတင်မထားပဲနဲ့ လိုချင်သူများ PM ပို့ပြီးတောင်းပါဆိုပြီ အဲလိုပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ကို nano ရ။ ကိုမောင် October 2009 edited October 2009 Registered Users ညီလေး Nano ရေ . . rapid မှာလို . .ကိုယ့်အကောင့်ကို ကိုယ်ပြန်ယူလို့မရဘူးလား . . . icyprince9 October 2009 edited October 2009 Registered Users မလုပ်သင့်ပါပူးဗျာလွန်လွန်းအားကြီးပါတယ်။ :14:သူများကစေတနာနဲ့ပေးထားတာကို။သူလဲပေးနိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့:14:down မလို့ကြံခါရှိသေးတယ်။ asoka October 2009 edited October 2009 Registered Users အကြံ ယုတ်မာပတ်စက်တဲ့ သူဘဲ...။ :14::14:အကျင့်မကောင်းတာဘဲ..သူများက စေတနာနဲ့ပေးတဲ့ဟာကို...အဲဒီလို လုပ်တာ တော်တော့လေးကိုခံစားရပါတယ်...။ ဒေါင်းရမယ့်ဟာတွေတောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ ဘူး..တကယ့်..:39::106: Morris October 2009 edited October 2009 Moderators ဟာအခိုးခံရတာလား ကျွန်တော်လည်း uploading.com မှာဒေါင်းစရာရှိလို ့ကို :14::14::14:မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအကျိုးရှိအောင်မောင်ပိုင်စီးတာကြီးကတော့ thihazaw October 2009 edited October 2009 Registered Users ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ..............:d myanmarmen October 2009 edited October 2009 Registered Users ဟိုက် ... :oကိုတွက်ပီရဲ့ စကားလို ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလားနော်............ ဟင်း........... အဲလိုလူမျိုးလည်း ရှိသေးသကို......... သြော် ... phoethat October 2009 edited October 2009 Registered Users အခုမှစမ်းဒေါင်းမယ်ကြံပါတယ်...ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာတုန်း........တော်တော်လေးစိတ်ပုပ်တယ်ဗျာ:oတင်ပေးတဲ့သူကိုမှအားမနာ......... Nano October 2009 edited October 2009 Registered Users ကျတော်လဲ account လေး Password ချိန်းခံရတော့ အရမ်းစိတ်လေသွားတယ်။အထက်က အကိုတွေ ပြောသလိုဘဲ့ နောက်တစ်ခေါက် အကောင့်ရှိရင် PM စနစ်နဲ့ဘဲ့ Share ပေးတော့မယ် . . . . .အခုလို အကြံပေးကြတာ အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ် . . . . .အကောင့်အသစ်လေး ရအောင် ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ် . . . . .:6: creativefox21 October 2009 edited October 2009 Registered Users ဘယ်လိုမိဘတွေက မွေးတဲ့သူတွေလဲဗျာ ... သူများစေတနာမှ အားမနာဘူး princeakarit October 2009 edited October 2009 Moderators တကယ်စိတ်လေတယ်ဗျာ....:14::14::14:အဲလိုလူမျိုးတွေက နိုင်ငံတော်ပစ္စည်း ခိုးနေကြကောင်တွေဘဲဖြစ်မှာ....ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အများပိုင်ပစ္စည်း ကိုယ်ပစ္စည်းလုပ်နေကြဆိုတော့ အကျင့်ကမပြောက်တာနေမှာပေါ့...ပြောတာလွန်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် မော်မော်တို့ မင်မင်တို့ရေ...ကတယ် စိတ်ပျက်မိလို့ပါဟူးးစိတ်လေတယ် ဆိုတာထက် အဆတစ်ရာ စိတ်လေတယ်:14::14: challenger220 October 2009 edited October 2009 Registered Users အဲဒါကြောင့်ပြောတာ စေတနာသည်လူတိုင်းနဲ့မတန်ဆိုတာ။တကယ်ပဲဗျာ ဒေါင်းမယ်ကြံခါရှိသေးတယ်။ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး၊ စိတ်လေတယ်။ :106: H3@v3n October 2009 edited October 2009 Registered Users ီdownload မယ် ကြံ သေး password change သွားပြီ:2::2::2:share ပေး တဲ. လူ ကို အား မနာ ပဲ လုပ် ရက် လေ ခြင်း ဗျာဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော လူ တွေ ကို အမြင် ကတ် တယ် kyawzintunn March 2010 edited March 2010 Registered Users ကျွန်တော်၀င်တာတော့ရတယ်ခင်ဗျ password က Indonesia မဟုတ်ဘူးindonesia နဲ့၀င်တာ အဆင်ပြေနေတယ် i အသေးပြောင်းတာဖြစ်မယ်ခင်ဗျ ..စမ်းကြည့်ကြပါဦး icyprince9 March 2010 edited March 2010 Registered Users ဟုတ်ပါတယ်အကို။။။ ကျွန်တော် i အသေးနဲ့ဝင်ကြည့်တာရသေးတယ် အကို။။။ ရှဲ့ရှဲ့။။။။ :) moenettharlay March 2010 edited March 2010 Registered Users kyawzintunn;71943 said:ကျွန်တော်၀င်တာတော့ရတယ်ခင်ဗျ password က Indonesia မဟုတ်ဘူးindonesia နဲ့၀င်တာ အဆင်ပြေနေတယ် i အသေးပြောင်းတာဖြစ်မယ်ခင်ဗျ ..စမ်းကြည့်ကြပါဦး
ကျနော် လုပ်ကြည့်တာတော့ မရဘူးနော် ...... ဟုတ်လို့လားဗျာ.... ပြန်ဖြေပေးပါအုးံနော်...ကျနော်လည်းလိုနေလို့ပါ။ rat March 2010 edited March 2010 Registered Users Thanks likeaworld. kyawzintunn March 2010 edited March 2010 Registered Users မိုးနတ်သားလေး;71961 said:ကျနော် လုပ်ကြည့်တာတော့ မရဘူးနော် ...... ဟုတ်လို့လားဗျာ.... ပြန်ဖြေပေးပါအုးံနော်...ကျနော်လည်းလိုနေလို့ပါ။
ရပါတယ်ဗျာ သေချာ၀င်ကြည့်ပါဦး .. nattsoe March 2010 edited March 2010 Registered Users ရပါတယ် ခင်ဗျာ အကုန်အသေးနဲ့ ၀င်ရင် ရပါသေးတယ်...... Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla